Masinin-tolo-kevitra Rio SEO: fanaraha-maso marika azo ovaina amin'ny marketing matanjaka eo an-toerana
Alakamisy 19 martsa 2020 Alakamisy 19 martsa 2020 Douglas Karr
Eritrereto ny fotoana farany nandehananao tany amin'ny fivarotana antsinjarany - andao atao hoe fivarotana fitaovana io - hividianana zavatra ilainao - andao atao hoe anglisy. Azo inoana fa nanao fikarohana an-tserasera haingana momba ny fivarotana enta-mavesatra teo akaikinao ianao ary nanapa-kevitra ny amin'izay alehanao miorina amin'ny ora fivarotana, lavitra ny toerana misy anao ary na tsia ny vokatra tadiavinao. Alao an-tsaina izany fanaovana izany fikarohana izany ary mitondra fiara any amin'ny magazay fotsiny
Ny serasera amin'ny fotoana tena izy dia manova ny fomba fampiasan'ny orinasa ny fisian'izy ireo tranonkala hifaneraserana amin'ny vina sy mpanjifa. Inona ny WebRTC? Web Real-Time Communication (WebRTC) dia fitambaran'ny kaonty sy API fifandraisan-davitra izay novolavolain'i Google tany am-boalohany izay ahafahan'ny fifandraisana amin'ny feo sy horonan-tsary amin'ny fotoana ifandraisan'ny mpiara-miasa. Ny WebRTC dia mamela ny mpizaha tranonkala hangataka fampahalalana amin'ny fotoana tena marina avy amin'ireo mpizahatany an'ny mpampiasa hafa, ahafahan'ny fifandraisana amin'ny peer-to-peer sy ny vondrona tena misy ao anatin'izany ny feo, horonan-tsary, chat, famindrana rakitra ary efijery
Mety hanondro olan'ny fampiasana sasany amin'ny lozisinao io rehefa tsy afaka manao zavatra tsotra toy ny manampy mpampiasa hafa ianao… ahhh, fa izany no tianay rehetra momba ny Google Analytics. Tena manoratra ity lahatsoratra ity ho an'ny iray amin'ireo mpanjifanay izahay mba hahafahan'izy ireo manampy anay ho mpampiasa. Tsy ny manampy ny mpampiasa no asa mora indrindra. Voalohany, mila mandeha any amin'ny Admin ianao, izay nifindran'ny Google Analytics teo ankavanan'ny farany amin'ny fitetezana
Ny mpanjifa antonony dia iharan'ny dokambarotra marobe isaky ny 24 ora. Izahay dia niala tamin'ny salan'isan'ny olon-dehibe tratry ny doka 500 isan'andro isan'andro tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny doka 5,000 isan'andro isan'andro Izany dia doka 2 tapitrisa isan-taona no hitan'ny olona salama! Anisan'izany ny radio, fahitalavitra, fikarohana, media sosialy, ary doka pirinty. Raha ny marina, doka fampisehoana 5.3 tapitrisa tapitrisa no aseho an-tserasera isan-taona Hatramin'ny naharihary anay